ယနေ့ ခောတ်လူငယ်တွေရဲမှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆလေးတွေပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » ယနေ့ ခောတ်လူငယ်တွေရဲမှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆလေးတွေပါ။
ယနေ့ ခောတ်လူငယ်တွေရဲမှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆလေးတွေပါ။
Posted by deathnote.book on Aug 28, 2010 in Jobs & Careers, Opinions & Discussion |6comments
မှားယွင်းနေတဲ့အယူအဆလေး မြန်မာပြည်က ဂျစ်ပဆီလေးများ
ဟုတ်ကဲ့..ယနေ့ ခောတ်လူငယ်တော်တော် များများရဲ့ မှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆလေးတွေကတော့ ဒီလိုပါခင်ဗျာ…….
အချိန်တန်ဘွဲ့ ရတော့အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့ အားထုတ်ကြတာကတော့ ကောင်းပါတယ် ….ဒါပေမယ့်….အဲဒီမှာတစ်ခုရှိတာက ဘာလဲဆိုတော့ ..ရတဲ့အလုပ်ကို
ကြုံသလိုဝင်လုပ်ပစ်လိုက်တယ် …ခဏတာအဆင်ပြေရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ..အတွေ့ အကြုံရချင်လိူ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့….လုပ်ကြပြီဆိုပါတော့ …..ကောင်ပြီ.အဲဒီအလုပ်က..cosmetic marketing ပေါ့နော်…လစာကတော့..အလုပ်စပြီးဝင်ကာစမို့ ထားပါတော့….(၃၅၀၀၀ ကျပ် basic pay+ရောင်းအား)
အဲဒီမှာပဲ…လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ ၎.၅.၆ လကြာလာပြီး…….လစာကတော့….ထင်သလောက်တိုးမလာ..ဘူး ရောင်းအားကလဲမကောင်းတော့.. ၅၀၀၀၀ကျပ်လောက်နဲပဲ
တင်းတိမ်ရတယ်ပေါ့….ဒီမှာတင်ပဲကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းအချို့ နဲပြန်တွေ့ ကြပြီး သူ့ အလုပ်ကိုယ့်အလုပ်ဆွေးနွေးကြပြီး…….သူ့ အလုပ်ကတော့ကောင်းတယ်…ငါ့အလုပ်ကတော့….ဘယ်လိုဖြစ်တယ်.. ဘယ်တင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး…… နောက်တပ်အလုပ်တစ်ခုကိုလှမ်းကြပါလေရဲ့ ……အဲဒီလိုလှမ်းကြပြီးတဲ့သကာလ…..အရင်အလုပ်….. လုပ်တုံးကလိုပဲနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောင်းချင်စိတ် တွေပေါ်လာပြီး…သံသရာမဆုံးနိင်တဲ့…ငါ့ညီတို့ ရဲ့ အယူအဆလေးတွေကို….ဒီလိုလေးအကြံပြုချင်လို့ ပါ……..
အလုပ်ဟူသမျှဂုဏ်ရှိစွဆိုတာတော့သိကြပါတယ်နော် …..ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာတော့ဂုဏ်ရှိရုံတင်မကဘူး…..ပညာပါရမယ့်ကိစ္စလေးပါ…..ငါ့ညီတို့ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲဝင်လုပ်ဝင်လုပ်……..သူတို့ ကကိုယိ့ကို….လစာပေးပြီးခိုင်းတယ်လို့ …မယူဆပဲနဲ့ ……လစာပေးပြီး…..ပညာသင်ပေးတယ်လို့ ယူဆကြည့် ပါလား
အဲဒါဆိုရင်…..ငါညီတို့ ငြင်းမှာလား…….မငြင်းပါနဲ့ …..ဟုတ်ပါတယ်……လောကမှာဘယ်သို့ သောအတတ်ပညာမှ…..အချီးအနှီးမဖြစ်ပါဘူး….(marketing) ပဲဇြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်……နောင်တစ်ချိန်မှာ……ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်နိုင်မည့် ပညာတွေပါပဲ……၆ လလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလဲ…၆လ နဲ့ တန်တဲ့အတွေ့ အကြုံကိုကောင်းစွာရယူပါ….လစာလေးပဲယူပြီး…အဲဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေ….အချိန်တွေ.အတွေ့ အကြုံတွေကိုသဲထဲရေသွန်မဖြစ်ပါစေနဲလို့ …………
death note has written2post in this Website..
i amaengineer of it.
View all posts by deathnote.book →
ကျနော်ပို့စ်တွေပေါ့ ” မြန်မာပြည်က ဂျစ်ပဆီလေးများ”တို့ “‘ဒီလောက်ဘဲရလို့ ဒီလောက်ဘဲလုပ်ရင် “တို့မှာ
ဖတ်မိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားစရာလေး တစ်ခုရသွားပြီဆိုရင် ကိုကျေနပ်တယ်သဘောထားပြီးရေးပေးနေပါတယ်။
လူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုဆောင်းပါးလေးတွေ အရမ်းလိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Yeah, i recommend above idea but, on the other hand, such salary must be covered enough for survival of one’s family. Everybody are learning and working very hard. What is their final goal? Just gather experiences or to live in good standard life ? Correct me if i made wrong comment !!!!!!
ဒီဆောင်းပါးလေးအရမ်းကောင်းပါတယ်။ နောက်လည်းဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကို အမြဲတင်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ ကြုံတွေနေရတဲ့ အမှန်ကန်ဆုံးအခက်အခဲတစ်ခုပါပဲ။
အရမ်းကိုကောင်းလိုက်တဲ့ပိုစ့်လေးပါ။ ဒါလူငယ်အတော်များများဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရင်ရည်မှန်းချက်မလွဲပါဘူး။ အတားအဆီးတွေကိုကျော်နိုင်ရင်ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖို့လမ်းစပါဘဲ။
ဒီပို့ commet ရေးတဲ့သူတော်တော်နည်းတာပဲ ကြိုက်တယ်လိုတော့
ဒီအကြောင်းက ပညာရေးအကြောင်းလည်းပါတယ် စီပွားရေးအကြောင်း
စီးပွားရေး အခက်အခဲနှင့် ပညာရေး အခက်အခဲ သို့မဟုတ်ပြသနာကို
မြန်မာနိုင်ငံမှလူငယ်များ ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ရှုမြင် သုံးသပ် ဖြေရှင်းကြ
မည်နည်း ဆိုရင် မှားမည်မထင်။
ပညာဆိုတဲ့ အပိုင်းကို ပညာပို့မှာ ဝင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်
သု စိ ပု ပါ ဝိ လိ သိ တာ တို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာ
သင် ကျက် မှတ် ဆွေးနွေ စဉ်းစား ကြံစည် ဝေဖန် ပွားများ
ဒါ စီးပွားရေး ကောင်းတယ် အသင့်အတင့်ဆို
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဓိကအရင်းအမြစ် Resourses ၃ မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုပဲ
Three type of resources
၁။ လူစွမ်းအား Human Resources
၂။ လူတွေလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်း Man Made Resources
၃။ သဘာဝ အရင်းအမြစ် Natural Resources
ဥပမာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲလူတွေထက် အဆတစ်သိန်းလူတွေ လုပ်သား
အကန့်အသတ်နဲရရှိ၍သာ ပိုက်ဆံပေးငှားနေတာပေါ နွန်မိုဆို အလကား
လူတွေလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာလည်း ကား အိမ် စက် ကွန်ပြူတာ ဘာ ညာ
နောက် သဘာဝအရင်းအမြစ်ဆိုတာလည်း ကိုယ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ် ကမ္ဘာ
အကန့်အသတ်နဲ့ ရရှိသော အရင်းအမြစ်များလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့
Limited Resources လို့ခေါ်တယ်
အဲဒီ အရင်းအမြစ်တွေကို သွင်းအားစုတွေလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့ဗျ
အဲဒီအရင်းအမြစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေထွက်
input – process – output လုပ်တယ်ပေါ့
output အနေနဲ့ ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဗျာ
ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေက အကန့်အသတ်နဲ့ပဲထွက်လာတယ်ပေါ့
တနည်း Limited input ကြောင့် Limited Output ထွက်လာတယ်ပေါ့
အဲ တဘက်လူတွေမှာကျတော့ ၂ ခုရှိတယ်တဲ့ဗျ
၁။ လိုအပ်ချက် needed
၂။ လိုအင်ဆန္ဓ wanted ( လောဘလို့လည်းဆိုလိုနိုင်တယ်တဲ့ဗျ)
လိုအပ်ချက် အရဆိုရင် လူတစ်ယောက်မှာ အထည်အဝတ် ၃စုံ ဆို လုံလောက်
တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်ရင် စားလို့ရရင် ဝတ်လို့ရရင် နေလိုရရင်ပြီးရော
လိုအင်ဆန္ဒ ဆိုတာကျတော အဝတ်အထည် အစုံ ၁၀၀ ရှိလည်း
တယ်ပေါ့နေစရာဆိုလည်းဒီအတိုင်း ဘဲ တိုက်နဲ့ ကားနဲ့နေချင်တယ်
aricon tv စလောင်း ဒါနဲ့တင်ပြီးရော့လား ရန်ကုန်မှာအိမ်တစ်လုံး
မန်းတလေးမှာ မေမြို့မှာ နေပြည်တော်မှာ ထက်လိုချင်တာ
အဲအစားအသောက်ကျပြန်တော့လည်း ဒန်ပေါက်မှ ကြက်သားဟင်း ဘူဖေး
ငါးကင် လိုအင်ဆန္ဒတွေ အကန့်အသတ်မရှိဘူးလေ
အဲဒီမှာ အကန့်အသတ်ရှိသော အရင်းအမြစ်များနဲ့ အကန်အသတ်မရှိသောလိုအင်
ဆန္ဒ ကြားမှာ ပြသနာတင်လာတယ်ပေါ့
problem of limited Resources and unlimited Wanted
သူ့ပစ္စည်းလိုချင်ရင် သူ့ ကိုသတ် ဒမြတိုက် ခိုး လုယူ
ဆိုပြီးရှာဖွေလာခဲ့ကြတာ စီးပွားရေးနည်းနှင့် ဖြေရှင်းကြမည်
အရင်းအမြစ်တွေ နှင့် ကုန်စည် နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်းအခြေခံမသိ
ဘဲနဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တွေ ဒီပြသနာမှရုန်းထွက်နိုင်မည်မထင်
ဟု ယူဆချက် တစ်ခု ထွက်လာပါသည်
ယနေ့ ခေတ်ဆိုသော စကားလုံးကို…
”ယနေ့ခေတ်” ဟုသာ.. ရေးချ မပါဘဲ…ရေးကြပါတော့သည်…. ။